Raha mampiasa ny version gratuite ianao dia azonao alaina any amin’ny Cyber ny code fa tsy voatery jerena amin’ny telephone. Maratra [ Inox ] Indraindray aho malomaloka mandinika matsiaro ireo tambitambinnao Tamin’ ireny aho tsy nahalala akory…. Mba tena hitia anao amin’ ny fo feno fitiavana Tena tiako ianao, izaho…. Avelao oa zah, avelao oa zah e! A 6 ans de la disparation de Bayard, sa famille en France lui rendra hommage le 10 novembre prochain avec des artistes qui sont passés par le « Studio Bayard » à Mahamasina. Bonjour à tous, Avant toutes choses, je tenais à remercier toutes les personnes qui, de près ou de loin ont participé à cette mémorable soirée du 10 no Tann Faya 4
Raha ohatra moa tsy afaka mampiasa Google Play dia alaivo eto ny fichier apk. Alaivo eto ny Code. Raha hampiditra tononkira dia mandehana eto. Mr Sayda Misié Sayda 10 2. Mpihira be mpitia 1.
Takelaka misy ireo tononkira malagasy. Raha hampiditra tononkira dia mandehana eto. Jereo eto ny lisitry ny mpihira ka raha tsy ao ny mpihira dia ampidiro eto na mitadiava tononkira yononkira. Tsy maintsy hoe nifitra ihany aho Tsy maintsy niala tampoka ihany aho Na mamiko aza ny revinao Na tsy….
Mba tena hitia anao amin’ ny fo feno fitiavana Tena tiako ianao, izaho…. Indraindray aho malomaloka mandinika matsiaro ireo tambitambinnao Tamin’ ireny aho tsy nahalala akory…. Toa gononkira ny fanahy, Raha mibanjina, Ny adim-piainana Izay mihasarotra, Aza mitanondrika.
Adala an’i jesosy 14 8. Tononkra atakaloko 13 9. Ho namako ianao feat Twokii 13 Mr Sayda Misié Sayda 10 2. Agrad sy Skaiz 6 7. Tanora Masina Itaosy 5 8.
Fandraisana Fanorotoroana Setasera ny takelaka Lisitra Hiditra. Midira eto azafady raha hampiditra hevitra. Mandeha [ Samoela ] Tsy maintsy hoe nifitra ihany aho Tsy maintsy niala tampoka ihany aho Na mamiko aza ny revinao Na tsy…. Tiako ianao [ Landry Rpj ] Couplet1: Jiro tsy misy [ roova ] Avelao oa zah, avelao oa zah e!
Mpandresy [ Antsan’i Fenomanana ] Mahatsiaro trotraka! Alaivo eto ny Code. Tondrom-peo vao tonga 1. Hira be mpitia 1. Mpihira be mpitia 1. News La ‘Génération B Valim-pitiavana ho an’i Fanaik Slt,fa maninona ilay fichier aplication tononkira no tsy mety telechargena intsony e.